amagciwane Eukaryotic ilifa organelles cell inwebu-ebotshiwe ziquka nomngundo kunye protists, ngoxa eziphilayo-wonke prokaryotic kuzo Cya-ngaba ngokuqhelekileyo zihlelwa engenaso organelles inwebu-ebotshiwe ziquka eubacteria kunye archaebacteria. Microbiologists ngokwesiko lathembela inkcubeko, amabala, kunye microscopy. Noko ke, ngaphantsi kwe-1% kwala magciwane akhoyo bume kungaba cultured bodwa usebenzisa iindlela yangoku.  Microbiologists adla izixhobo ezinto eziphilayo ezifana yesazisi esekelwe ulandelelwano DNA, umzekelo 16s rRNA ukulandelelana gene esetyenziselwa lwegciwane lokuzazisa.
Microbiology kukufunda zonke izinto eziphilayo ezincinane kakhulu ukuba zibonakale ngeliso lenyama. Oku kuquka iintsholongwane, archaea, iintsholongwane, nomngundo, prions, lenyama kunye ulele, elaziwa ngokuba 'ziintsholongwane'. Ezi amagciwane badlale indima ephambili ibhayisekile zizondlo, biodegradation / biodeterioration, ukutshintsha kwemozulu, ukonakala kokudla, unobangela kunye nolawulo izifo, kunye nebiotechnology. Ngenxa yokusebenza kwabo, iintsholongwane angabekwa ukusebenza ngeendlela ezininzi: ukwenza esindisa ubomi, eyimveliso lwezibasi zendalo, ekucoceni ungcoliseko, ezivelisa / ukutya processing kunye eselwayo.
Microbiologists ukufunda amagciwane, yaye ezinye lwezona zinto ezibalulekileyo zixhasa uluntu lwale mihla ezibangelwe kuphando of eziziingangamsha, ezifana Jenner kunye sogonyo yakhe ingqakaqa, Fleming nokufunyanwa penicillin, Marshall kunye nokuchongwa unxulumano phakathi Helicobacter pylori usuleleko kunye nezilonda esiswini, noTsure Hausen, owathi unxulumano phakathi papilloma virus kunye nomhlaza womlomo wesibeleko.
uphando Microbiology kuye, yaye usaqhubeka, ngundoqo ukuhlangabezana abaninzi eyinkuthazo zehlabathi yangoku kunye nemingeni, efana nokugcina ukutya, amanzi kunye nokhuseleko amandla yabantu abanempilo phezu elimiweyo. Kwakhona uphando Microbiology kuya kunceda ekuphenduleni imibuzo ezinkulu ezifana 'ezohlukeneyo ngayo ubomi emhlabeni?', kunye 'ubomi ikhona kwenye indawo kwi Yonke'?
ixesha Post: Dec-04-2018